Tatoazy karandoha ho an'ny vehivavy | Ny fanaovana tatoazy
Nat Cherry | | Tatoazy zavatra sy zavatra, Tatoazy ho an'ny vehivavy
Eny. Tsy vao sambany tany Tatuantes no niresaka momba ny tatoazy karandoha. Ary fantatsika fa ny resaka momba ity karazana tatoazy ity dia zavatra tena ankapobeny. Na izany aza, androany dia te hifantoka bebe kokoa amin'ireo endrika tatoazy ho an'ny vehivavy izahay.
Ary ny zava-misy dia miova izany raha mifantoka amin'ny firaisana ara-nofo isika. Na dia tatoazy ratsy aza izy io, dia mety ho tena mamoafady. Saingy tsy noho ny maha-vehivavy ny karandohany dia voafetra amin'ny perla, glitter ary ny filan'ny nofo.: Araka ny ho hitanao etsy ambany, dia mety koa ny famolavolana tena misy sy manaitra kokoa.
1 Aiza no hahazoana tatoazy karandoha
2 Hevitra tatoazy ho an'ny vehivavy
2.1 Karandoha misy kintana sy tsipìka
2.2 Mpamosavy miaraka amin'ny karandoha
2.3 Karandoha misy siramamy
2.4 Karandoha tena misy
2.5 Karandoha amin'ny tendany
2.6 Tattoo karandoha nentim-paharazana
2.7 Karandoha misy perla sy voninkazo
2.8 Karandoha roa
2.9 Karandoha neo-traditional ao ambadika
3 Sarin'ny Tatoazy karandoha ho an'ny vehivavy
Aiza no hahazoana tatoazy karandoha
Raha hainao ny manao ireo tatoazy ireo dia hanaiky izany ianao afaka mijery tsara amin'ny faritra samihafa izy ireo ny vatan’ilay vehivavy. Avy amin'ny ilany iray mankany amin'ny feny na ny zanak'omby, fa koa amin'ny hato-tanana, sandry na tanana.
Ny zavatra tsara momba ny karandoha dia singa tena azo ampiasaina izy ireo, izay miasa amin'ny endrika kely kokoa, lehibe kokoa na koa miaraka amin'ny singa fototra iray. Mazava ho azy, ny karazana karandoha misy tombokavatsa koa dia misy fiantraikany ary misy karazana sasany, toy ny tatoazy karan-doha meksikana (karandohany siramamy) izay, noho ny lokony sy ny bikany, dia tsara kokoa amin'ny toerana maro loko toy ny tongotra na ny forearm.
Hevitra tatoazy ho an'ny vehivavy
Amin'ity fanangonana tatoazy manaraka ity dia asehonay anao ny karazana tatoazy karandohany ho an'ny vehivavy. Ny sasany amin'izy ireo dia mahery vaika sy mahery vaika kokoa noho ny hafa, na dia amin'ny ankamaroany aza, izy ireo dia miavaka amin'ny fampitana ny hatsarana ary koa ny lafiny ratsy sy miafina.
Karandoha misy kintana sy tsipìka
Famolavolana tena mahafatifaty, miaraka amin'ny kintana sy tsipìka. Ny loko mavokely dia mifanaraka tsara aminy ary mamy ny manontolo, hany ka toa vatomamy mihitsy aza. Izy io dia endrika tonga lafatra ho an'ny sombin-javatra kely sy hita, ohatra, eo amin'ny sandry na kitrokely. Tsy isalasalana fa ny fomba mety aminy dia ny neotraditional na sariitatra ho an'ny fikasihana mahazatra azy.
Mpamosavy miaraka amin'ny karandoha
Rehefa nilaza izahay fa ny karandoha dia mety ho singa iray miaraka amin'ny iray hafa manan-danja kokoa, dia niresaka momba ny endrika tahaka izao izahay. Misy zavatra vitsivitsy izay manome hery mihoatra noho ny mpamosavy: nenjehina izy ireo noho ny maha-vehivavy tsotra azy (ary matetika noho ny antony miafina izay tsy misy ifandraisany amin'ny ody) ary ny sain'izy ireo mifandray amin'ny natiora, mazia ary ny asan'ny maizina dia mahatonga azy ireo ho tonga lafatra. HO AN'NY manentana tatoazy amin'ny mainty sy fotsy na miloko miaraka amin'ny karandoha, voalavo, goaika, vilany, kifafa ...
Karandoha misy siramamy
ny karandohany siramamy, mahazatra ny Meksikana Andron'ny Maty, dia iray amin'ireo fitaomam-panahy lehibe ho an'ny tatoazy karandoha miaraka amin'ny vehivavy. Ny tsara indrindra dia ny milalao amin'ny endrika misy ny karandohany ao anatiny, matetika vita amin'ny sisin-tany sy voninkazo miloko marevaka izay maka tahaka ny zava-mamy amin'ity fety ity na ny Catrinas, singa mahazatra amin'izao andro izao.
Ankoatra izany, Tena samihafa izy ireo, satria mijery tsara amin'ny toerana tsy mitovy amin'ny sandry na ny sisinyIzy ireo dia azo ampiarahina amin'ny singa hafa toy ny elatry ny lolo, ny fo na ny voninkazo ary mitambatra tsara amin'ny fomba toy ny nentim-paharazana, sariitatra na tena zava-misy mihitsy aza.
Karandoha tena misy
Tsy misy fiantraikany mihoatra noho ny vehivavy karandoha mainty sy fotsy izay mitana ampahany tsara amin'ny tongotrao na ny lamosinao: fampahatsiahivana ny fiainana an-tany izay hamela ny olona hisokatra ny vavany ary hanandratra anao ho amin'ny sokajin'ilay zazalahy ratsy eo amin'ny manodidina anao. Ampifandraiso amin'ny lafika geometrika izy io mba hanomezana azy endrika maoderina na safidy, toy ilay tovovavy amin'ny sary, mba handehanana amin'ny singa mahazatra kokoa toy ny famantaranandro. (fampahatsiahivana iray hafa momba ny fotoanantsika voafetra) ary mitadiava mpanao tombokavatsa izay manam-pahaizana manokana amin'ireo karazana tatoazy ireo izay mahafantatra ny fomba hahazoana tombony amin'izany.
Karandoha amin'ny tendany
Tsy hamitaka anao izahay: mba hahafahanao manao endrika toy izany dia tsy maintsy manao azy tsara ianao, ary tsy hoe satria mahavariana izany ary, amin'ny ampahany noho ny toerana, dia afaka mampita ny herisetra, fa satria ny tenda dia iray amin'ireo toerana maharary indrindra hanaovana tatoazy.
Tattoo karandoha nentim-paharazana
Tsy misy isalasalana, Ny iray amin'ireo endrika tiana indrindra dia ilay manao karandoha mendrika hiseho amin'ny saina piraty rehetra. Eny tokoa, isika miresaka momba ny fomba nentim-paharazana karandoha. Tena tsara tarehy izy ireo amin'ny endrika kely dia kely ary miaraka amin'ny singa hafa mitovy lohahevitra (toy ny raozy, cacti ...).
Amin'ny maha-protagonista amin'ny famolavolana, azonao atao ny misafidy tatoazy izay manana tsipika tsara indrindra ary miaraka amin'ny singa hafa. ( ohatry ny mosoara, ohatry ny eo amin'ny sary, na paty, raozy ...) na manome fitenenana mampihomehy, toy ny hoe mihomehy.
Karandoha misy perla sy voninkazo
Tsy endrika tsy misy dikany amin'ny tatoazy karandoha ho an'ny vehivavy izany, fa Tena manintona tokoa izy io amin'ny toerana malalaka toy ny feny raha toa ka lehibe ny endrika. Ny hafetsena mba tsy ho fisaka loatra dia ny fitadiavana mpanao tatoazy izay mahay manome ny famolavolana ny halalin'ny ilainy, ka mila manam-pahaizana momba ny aloka ianao.
Tsy misy fisalasalana iray amin'ireo endrika tsotra indrindra nefa miaraka amin'ny endrika mahafinaritra azonao isafidianana. Ny karandoha avo roa heny dia tsy tanin'ny mpivady pasty ihany, fa afaka mahazo endrika tena mahafinaritra ihany koa ianao. Fidio tsara ny toerana (sandry, hato-tanana, tanana na rantsantanana mihitsy aza) sy ny karazana karandoha tianao (mitovy na misy fahasamihafana kely, ohatra) mba hiavaka ny endrikao.
Karandoha neo-traditional ao ambadika
Farany, Ny tatoazy sy ny karandoha neotraditional dia mitambatra tsara. Miaraka amin'ny spektrum midadasika kokoa noho ny mahazatra, azonao atao ny misafidy ny endrika tsy dia mahazatra ary, ohatra, mametraka wig amin'ny karandoha na manambatra azy amin'ny loko maro kokoa noho ny mainty sy mena nentim-paharazana. Hevitra tsara ihany koa ny manambatra azy ireo amin'ny karandoha Meksikana ary "loko" ny karandoha nentim-paharazana miaraka amin'ny sisin-tany mahazatra ny karandohany siramamy mba hahazoana endrika tsy manam-paharoa tanteraka.
Ny tatoazy karandoha ho an'ny vehivavy dia tonga lafatra amin'ny andilany, tongotra ary toerana maro hafa. Lazao anay, manana tatoazy amin'ireo toetra ireo ve ianao? Ahoana ny hevitrao momba azy ireo? Misy dikany manokana aminao ve izany? Aza adino ny mizara aminay ny hevitrao momba ity karazana tatoazy ity.
Sarin'ny Tatoazy karandoha ho an'ny vehivavy
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ny fanaovana tatoazy » Karazana tombokavatsa » Tatoazy zavatra sy zavatra » Tatoazy karandoha ho an'ny vehivavy, mampiseho ny lafiny ratsy indrindra aminy
Fanangonana tatoazy peratra, marefo sy kanto